Miaraka amin'ny toby famokarana roa any Shanghai sy Kaifeng, ny orinasanay dia manarona faritra 20000 metatra toradroa. Ary mampiasa mpiasa maherin'ny 480 i Bensen; Afa-tsy ireo tsipika famokarana Microfiber roa, dia nanafatra fitaovana famokarana matihanina ihany koa izahay. Fananganana ny maody fitantanana manara-penitra, nahazo ny fanamarinana ny rafitra fanaraha-maso kalitao ISO9001 sy ny rafitra fanaraha-maso ny tontolo iainana ISO 14000 izahay. Bensen dia mampihatra hatrany ny foto-kevitra momba ny famoronana lanja ho an'ny mpanjifa ho an'ny mpanjifa namboarina mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa samy hafa, ary manome vahaolana ho an'ny mpanjifa hatrany sy olana ara-teknika. Fikarohana bebe kokoa sy fanavaozana ary hatsarana.
Nandritra izay 10 taona lasa izay， bensen dia nifikitra hatrany tamin'ny "kalitaon'ny vokatra mba hahatafavoaka velona, ​​tanjona amin'ny serivisy fitokisana sy serivisy fampandrosoana". Manolo-tena hanome anao vokatra avo lenta sy serivisy kalitao. Manana ekipa fitantanana matihanina matihanina sy vita fanoloran-tena izahay, manomboka amin'ny famolavolana vokatra, famolavolana bobongolo, famolavolana ny fivorian'ny vokatra, ho an'ny lafiny tsirairay sy ny fizotrany dia sedraina mafy sy hifehezana izy ireo.
Ny tena vokatra dia misy: hoditra PUV, hoditra PU, hoditra Microfiber izay be mpampiasa amin'ny fonon'ny seza fiara, ao anaty fiara, eo amin'ny tontolon'ny varavarana fiara, sns. USA, fa nanondrana any amin'ny firenena Aziatika ihany koa. Ary ankoatr'izay dia mamokatra hoditra vita amin'ny fofona ihany koa izahay, hoditra fonosan'ny seza fiara, farafara misy ny fiara sns. Nanjary orinasa mitarika eo amin'ny sehatry ny hoditra synthetic izahay.
Ny asa aman-draharaha mifanaraka amin'ny lalàna mifehy ny fanjakana, ny fitsipika ary ny fitsipiky ny fitantanana ny fitakiana WTO araky ny lalàna, mandray anjara mavitrika amin'ny fiaraha-miasa ara-toekarena isam-paritra, ny vina aman-draharaha ary ny tsara, amin'ny manaraka, dia hanitatra ny ambaratongan'ny asa sy ny fampandrosoana maharitra ny toekarena orinasa , mitady mpiara-miasa am-pahatsorana, fiaraha-miasa amin'ny finoana tsara ary mitady fampandrosoana iraisana.
Eo ambanin'ny fitsipiky ny fiaraha-miasa mandresy fandresena, manome hatrany ireo fitaovana avo lenta sy avo lenta ary serivisy tsara indrindra i Bensen, ary miasa ho an'ny fiaraha-miasa amin'ny teny frantsay sy ny mpanjifanay rehetra.